भिडिओ स्टोरी : ‘सुगर’का रोगीले... :: डा. सुजय दत्त पौडेल :: Setopati
भिडिओ स्टोरी : ‘सुगर’का रोगीले थोरै खाने तर धेरै पटक खाने
डा. सुजय दत्त पौडेल
रगतमा चिनीको मात्रा अत्यधिक बढ्नु नै मधुमेह(सुगर) हो। यसलाई चिनी रोग,डाइभिटिज पनि भनिन्छ। यो मोटोपनका कारणले समेत लाग्ने रोग हो। वंशानुगत कारणले समेत सुगर हुने गर्छ। शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा घट्दै जाने र यसले काम नगर्नु पनि सुगर रोग हो।
सुगर रोगको लक्षण सबैमा देखिन्छ भन्ने छैन। यसका लागि नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ। मुख सुक्ने,बारम्बार पिसाब लाग्नु,भोक अत्यधिक लाग्नु,तर दुब्लाउँदै जानु यो रोगको लक्षण हो। सुगर लागेको व्यक्तिलाई कुनै घाउ भएको छ भने निको हुन समेत समय लाग्छ।
सुगर लाग्नबाटै बच्न सकिने उपायहरू पनि छन्। त्यसका लागि ३० वर्ष उमेर पुगेपछि वर्षमा एक पटक रगत जाँच गरेमा सुगर रोग भए नभएको थाहा पाउन सकिन्छ । यदि सुगर हुने चरणमा रहेको छ भने यसलाई पर धकेल्न सकिन्छ। यदि सुगर लागेको रहेछ भने चिकित्सकको सल्लाह अनुसार नियमित औषधि प्रयेग गर्नुपर्छ। यदि रगतमा सुगरको मात्रा धेरै नै बढेको छ भने इन्सुलिनको प्रयोग समेत गर्नुपर्छ। सुगरको उपचार पनि महँगो छ। केही औषधिहरू मात्रै सस्तो छ। त्यसैले यो रोगबाट सुरूमै बच्ने उपाय सोच्नुपर्छ। खानपिनमा ध्यान दिने, नियमित व्यायाम गर्ने हो भने सुगरबाट बच्न सकिन्छ। एकैचोटी धेरै नखाने बानी बसाल्नुपर्छ।
सुगर रोग लागेकाहरूले यो खान हुने, त्यो नहुने भन्ने छैन। सामान्य मान्छेले पनि पेटभरि खानु राम्रो होइन। २,३ पटकमा खाने खानालाई ५,७ पटकमा खाने हो भने अझै राम्रो हुन्छ। भात थोरै खाने अनि सागसब्जी धेरै खाने गर्नुपर्छ। कार्बोहाइड्रेट मिसिएको खानाभन्दा प्रोटिन मिसिएको खाना बढी खानुपर्छ। मिठाइ धेरै नखाने,फास्टफुड,जंक फुड र पेय पदार्थको सट्टामा जौ,मकै,आटा लगायतका घरेलु खाना खानुपर्छ।
सुगर आफैंमा खतरनाक होइन। तर सुगरका कारण शरीरका अन्य अंगहरूलाई हानी हुन्छ। यसले जुन जुन अंगमा हान्छ त्यो खतरनाक हुन्छ। सुगरका कारण आँखामा समस्या आउन सक्छ। किड्नीमा समस्या आएर डायलेसिस समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले मुटुलाई असर गर्छ भने नशाहरूमा समेत समस्या निम्तिन्छ।
बढ्दै सुगरका रोगी
विभिन्न अनुसन्धानले नेपालको जनसंख्याको १० प्रतिशतलाई सुगर रहेको देखाएको छ। तर अस्पतालहरूको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सुगरका रोगीहरू धेरै छन्।
अस्पतालमा प्याकेजमा स्वास्थ्य जाँच गर्न आउनेहरू र अन्य उपचारका क्रममा आएकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीलाई सुगर रहेको पाइएको छ। अहिलेको सबभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको युवा अवस्थामै सुगर देखिनु पनि हो। ४० वर्षभन्दा माथिको उमेर भएकालाई सुगरको समस्या देखिने गरेको भए पनि अहिले २०,२५ वर्षकै उमेरमा समेत सुगर देखिन थालेको छ।
(डा. मधुमेह रोग विशेषज्ञ हुन्।)
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २३, २०७५, ०१:४६:००